बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने – Khabar PatrikaNp
बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने
बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने कार्यक्रमको औपचारीक सुरुवात गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटको बुँदा नं. ५५ र २८५ को कोरोना बीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीहरूको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी कर्मचारीहरूको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको हो।
समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क सामूहिक बीमा गर्ने सम्बन्धमा बजेटले व्यवस्था गरेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। उनले नागरिकले आफ्नो परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। परिवारका सबै सदस्यको सामूहिक बीमा गरे मात्रै उक्त अनुदान पाउने भन्दै अध्यक्ष चापागाईंले यस्तो बीमालेखको अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म मात्र हुने बताए।
बीमालेख खरिद गर्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको भएमा १५ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेको र थप १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै सामूहिक कोरोना बीमाका लागि एकाघर परिवारका सदस्यहरू उल्लेख गरिएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
त्यस्तै अनुदान प्राप्त गर्नका लागि समितिबाट जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा तोकिए बमोजिमका जोखिमाङ्कन व्यवस्था सम्बन्धी कागजात, एकाघर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सामूहिक बीमा गरिएको स्वघोषणा एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात, एकाघर परिवारका सदस्यहरूको नाम तथा उमेर खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात, विगत ३० दिनसम्म नेपालमा नै बसोबास गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ।
बीमालेख अन्तर्गत एक लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क कायम गरिएको छ। एक लाख बीमाङ्क कायम भएको बीमालेखका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार र ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय बीमाशुल्क कायम गरिएको छ।
परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सामूहिक बीमा गरिएको खण्डमा १ लाखको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति ६ सय र ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति ३ सय बीमाशुल्क लाग्ने छ। परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा १ लाखको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ र ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति १ सय ५० रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान उपलब्ध हुनेछ।
कोरोना बीमालेख खरिद गरेको १५ दिनपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बीमालेख बमोजिमको रकम भुक्तानी हुने बीमा समितिले जनाएको छ।
त्यसको लागि बीमालेख दाबी गरेको ७ दिनभित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ। दाबी भुक्तानी नहुँदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानूनी हकवालालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमकले सामूहिक बीमा गर्दा उल्लेखित प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत गरेको पाइए बीमाशुल्क अनुदान स्वरुप उपलब्ध नहुने पनि समितिले स्पस्ट पारेको छ। तर त्यस्तो बीमितको कोरोना संक्रमण भएको पाइएमा बीमालेख विक्री गर्ने बीमा कम्पनीको वासलातबाट दावी भुक्तानी दिन सम्बन्धित बीमकलाई समितिले निर्देशन दिन सक्नेछ।
Prevकाठमाडौंमा भूकम्पको धक्का
Nextभाइरल बनेका अर्जुन बि.क. आफ्नो जन्मभुमी कैलालीकिन हिँडे ?भिडियोहेर्नुहोस
कोरोना समाप्त होस् भन्दै विशेष पूजा पशुपतिमा; ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस् पशुपतिनाथ ले रक्षा गर्नेछन्!
बजारबाट स्यानिटाइजर किन्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहाेस यी तीन कुरा !
बैंक अकाउण्टमा ६० रुपैयाँ थियो तर, अचानक खातामा ४८ करोड रुपैयाँआएपछि….
कसरी आयो होला ४ वर्षकी बालिका माथि यस्तो कु’क’र्म गर्ने सोँच ? कल्पना पनि गर्न नसकिने घटना देख्नुपर्दा मन नै सिरिंग हुन्छ (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33409)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33240)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (28988)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27200)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25070)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22475)
एका बिहानै बिसाल नाग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ (21117)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (19954)
होसियार ! क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउँछ यी ५ खानाको बढी सेवन गर्नाले (19438)
काभ्रेमा रुहाउने दुर्घटना :2जनाको ज्यान गयो (17526)